milina famenoana shampoo sy capping
Lisitry ny fitaovana sy ny teny nindramina
Rotary tavoahangy manual
Ampidiro amin'ny fitoerany ao anaty fitoeram-tavoahangy foana ilay tavoahangy
Mpihazona tavoahangy ao anatiny sy ankavia
GF16 / 5 Rotary Piston Filling and Machine Capping
Masinina famenoana piston 16-loha; fiasan-doha 5-loha.
Karazana mihantona varingarina, familiana cam, firafitry ny valizy mandroso iraisam-pirenena
Atsangano ho azy ny satroka tavoahangy ho mpamosavy
Vita amin'ny vy vy 304 sy fingotra malefaka
Mpisorona misarona mandeha ho azy
Arindra ho azy ny fonony
Ity fitaovana fanapahana ity dia natao manokana ho an'ny tavoahangy shampooing misy tavoahangy miendrika manokana. Fitaovana fanidiana hafa tsy azo tanterahina.
Làlana rakotra fehikibo
Masinina famahanana satroka mandeha ho azy
Mampita mpihazona tavoahangy
Fametahana tavoahangy sy milina fampiroboroboana
Ho an'ny fonosana artifisialy
Ho an'ny tavoahangy sy tavoahangy
1. Ampidiro amin'ny tanana ny latabatra fihodinan'ny tavoahangy.
Ity milina ity dia mety amin'ny fampidirana ny tavoahangy banga amin'ny fitoeran-tavoahangy banga amin'ny tanana ary hamenoana ny fizotry ny fantsom-bokatra.
Fahafahana: tavoahangy / ora 25,000
Diametera fihodinana: 1000mm
Refy: 1000X1000X9500 (mm)
Ity fehikibo ity dia vita amin'ny fitaovana SUS304 ho an'ny tabilao mpampita rehetra izay mahafeno tanteraka ny fepetra fidiovana. Ny takelaka rojo fitaterana dia vita amin'ny plastika injeniera, fantatra amin'ny anarana hoe vy plastika, izay mahazaka akanjo nefa tsy mandratra ny tavoahangy.
3. 16/5 Masinina famenoana piston sy rotary
Ity masinina iray manontolo ity dia natokana ho an'ny famenoana sy ny fametahana ireo fitaovana avo lenta toy ny shampoo, shampooing, body lotion, conditioner, tantely, saosy sns, satria tsy dia misy tsiranoka ny fitaovana, tokony ampiana ilay masinina ny tsindry ihany no ahafahana mameno azy, noho izany ity milina ity dia mandray ny fomba famenoana piston sy ny karazana varingarina mihantona mihodina, izay afaka mahafeno tanteraka ny filan'ny fitaovana viscosity avo lenta miaraka amin'ny viscosity avo. Mba hampihenana ny fandotoana faharoa, ny masinina dia mampiasa satroka famenoana- Nanatsara be ny fahombiazan'ny famokarana, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sakafo sy ny GMP simika isan'andro, ary tena mety amin'ny fikojakojana sy fanadiovana manaraka. Ny varingarin'ny piston sy ny valizy misy azy dia mampiasa rafitra mandroso sy valizy miharo volo, izay tsy vitan'ny mandresy ny fiainana fohy amin'ny valizy sy ny fanodinana Ary ny fahasarotana fametrahana, ny vidin'ny fikolokoloana avo, ny tombo-kase henjana, ny fanadiovana ratsy ary ny lesoka hafa, fa manatsara be ihany koa ny famenoana ny fahamendrehana sy ny fanamorana ny fanadiovana; ny varingarina misy valiny sy ny valizy misy ny masinina dia ny sehatra iraisam-pirenena Ankehitriny miaraka amin'ny vahaolana zoro mandroso sy matotra kokoa; izy io no fitaovana famokarana tsara indrindra ho an'ny orinasa mpamokatra maro.
Ny masontsivana teknika lehibe
Hery: AC 220V; 50HZ
Herin'ny milina: 3KW
Mameno loha: 16
Isan'ny lohan'akanjo: 5
Fitaovana loharanon-drivotra: 0.65Mpa
Famaritana fitoeran-javatra azo ampiharina:
Haavony: 80mm ~ 280mm
Famaritana momba ny fonony azo ampiharina:
Haavony: 10mm ~ 35mm
Vokatra: 2500P / h
Haben'ny ankapobeny: 2300x2150x2300mm
4. Masinina fanalana volo ho azy
Ity milina fametahana ity dia namboarina manokana amin'ny fametahana tavoahangy miendrika manokana misy endrika manokana ho an'ny indostria simika isan'andro. Ity masinina ity dia sarotra kokoa noho ny milina fanefana tsotra. Amin'ny fampiasana ny endrik'ilay satroka, misy takelaka gara maromaro mifanaraka aminy no natao. Ny vilany ivelany dia mihodina amin'ny fotoana iray, ary manosika ny sarom-bilany ho ao anaty lasitra concave fonosana mifanaraka amin'izany ao amin'ny tobin'ny asa. Ary farany, ny fonony dia tsentsina tsirairay avy amin'ny fehin-kibo mifamadika vaksina, atosika ao amin'ilay lalan'ny famahanana satroka, ary ny tavoahangy dia alefa ao anaty fitoeram-pisakafoanana amin'ny masinina ary mamita ny asa.
5. Fametahana tavoahangy sy milina fampiroboroboana
Ity milina ity dia natao manokana ho an'ny tsipika famokarana tavoahangy miendrika tavoahangy. Ireo tavoahangy feno sy feno kapoaka dia alaina ao amin'ireo fitoeran'ny tavoahangy. Voahidy ny tavoahangy voalohany, milatsaka ho azy ny mpihazona tavoahangy noho ny hery misintona, ary avy eo miverina any amin'ireo fitoeran'ny tavoahangy.
Refy: 1600 * 850 * 1100
6. Sehatra fonosana artifisialy
Ity sehatra ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony ary mahafeno ny fepetra takian'ny GMP.
7. Mpihazona tavoahangy
Ny mpihazona tavoahangy dia manana asa roa. Ny iray dia ny fanampiana tavoahangy miendrika tsy ara-dalàna izay mora araraka tavoahangy amin'ny fehikibo. Ny faharoa dia ny fampiraisana ireo tavoahangy misy famaritana sy karazany maro, ahafahan'ny tavoahangy miditra ao amin'ilay fitoeran'ny tavoahangy. Ny masinina mameno sy mametaka dia manana haavony mitovy, ary ny lovia famahanana tavoahangy mifanaraka amin'izany dia mitambatra ihany koa. Na torolàlana famahanana tavoahangy io, lovia famahanana tavoahangy, ny haavon'ny milina famenoana, na ny haavon'ny milina fanidiana, tsy ilaina ny manitsy azy. Tsy mampihena fotsiny ny asan'ny mpiasa rehefa soloina ny tavoahangy famaritana, ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana, nefa koa ny milina iray misy tanjona marobe, ary azo ampiharina marobe ny famaritana, izay mampihena be ny vidin'ny fitaovana ho an'ireo orinasa mpamokatra.
Previous: Famenoana fantsona semi-mandeha ho azy sy milina famehezana
Manaraka: Fantsom-pamokarana hafanana anatiny sy fametahana tombo-kase
famenoana sy fanakanana tsipika
Fantsom-pamokarana hafanana anatiny sy fametahana tombo-kase